Entertainment Archives - Page3of6- National News
भारतविरुद्ध बेल्जियममा भयानक प्रर्दशन हेर्नुहोस,
भारतविरुद्ध बेल्जियममा भयानक प्रर्दशन, “गो ब्याक इण्डिया” को नारा घन्कियो ! (भिडियो सहित)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇 Believing that news is for everyone and all the people have an equal right to receive true and factual information at anytime, anywhere.We areateam of dedicated, vibrant, professional, experienced and energetic people putting […]
सिमामा गस्ती गरेको ४ भारतीय सैनिकको मृत्यु, ३ चौकी ध्वस्त, कालापानी विवाद ओलीको भाषण भारतमा भाइरल हेर्नुहोस, (भिडियो) Believing that news is for everyone and all the people have an equal right to receive true and factual information at anytime, anywhere.We areateam of dedicated, vibrant, professional, experienced and energetic people putting our efforts […]
वीरगञ्जमा डरलाग्दो गोली हानाहान, दार्चुलाको कालापानीमा सेना पठाउन माग..! हेर्नुहोस,
वीरगञ्जमा डरलाग्दो गोली हानाहान, दार्चुलाको कालापानीमा सेना पठाउन माग..! हेर्नुहोस, (भिडियो Believing that news is for everyone and all the people have an equal right to receive true and factual information at anytime, anywhere.We areateam of dedicated, vibrant, professional, experienced and energetic people putting our efforts to set new dawn in the field […]
सीमामा हानाहान, नेपाली ले भारतीय सेनाको टाउँको फुटाइदिए हेर्नुहोस,
बिहानै सीमामा ढुंगा हानाहान, नेपाली विद्यार्थीले भारतीय सेनाको टाउँको फुटाइदिए हेर्नुहोस, (भिडियो Believing that news is for everyone and all the people have an equal right to receive true and factual information at anytime, anywhere.We areateam of dedicated, vibrant, professional, experienced and energetic people putting our efforts to set new dawn in the […]
आलमले आफू विरुद्ध लाग्नेलाई मार्ने आगो लगाउने
आलमले प्रहरीकै अगाडि दिए मान्छे मार्ने र आगो लगाउने धम्की (भिडियाेसहित) प्रहरीकै अगाडि आलमले आफू विरुद्ध लाग्नेलाई मार्ने मात्र नभएर जिल्ला नै अशान्त बनाउने धम्की दिएका छन् । आलम हाल ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका छन् । उनी १२ वर्षअघिकाे साे बमकाण्डमा गत असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]
ओलीले बोले तीन करोड नेपालीको आवाज भारतलाई ठाडो चुनौती
ओलीले बोले तीन करोड नेपालीको आवाज दिए फौज फिर्ता लैजान भारतलाई ठाडो चुनौती PM KP OLI Speech! हेर्नुहोस भिडियो पोखराको जिरो किलोमिटरमा शनिबार राती भयानक दुर्घटना भएको छ । विन्ध्यवासीनिबाट जिरो किलोमिटर तर्फ आउदै गरेको जिप जिरोकिलोमिटर आइ नपुग्दै दुर्घटना भएको हो ।ग१ज ६४७९ नम्बरको जिप तीब्र गतिका कारण दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाई छ । […]
चितवन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिले एक भिडियो भाइरल भैरहेको छ । जसमा एक हात्तिले बसको बाटो छेक्छ । फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्ने बुद्धिबहादुर गुरुङ्गले राखेको जानकारी अनुसार काठमाडौंबाट माँडी हुँदै ठोरी चल्ने नाइट बसमा यो घटना घटेको हो । गुरुङ्गका अनुसार आज (शनिबार) उक्त घटना घटेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चौतारा भन्दा […]
शालिकरामको हत्या गर्न १ करोड लिएको हु भनी दाबी गर्दै मिडियामा आए यी ब्यक्ति
शालिकरामको हत्या गर्न १ करोड लिएको हु भनी दाबी गर्दै मिडियामा आए यी ब्यक्ति काठमाडौं । ब’लात्कारपछि ह त्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया कि शोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान साघुरिँदै गएको छ । घटनाको विभिन्न कोणबाट सुक्ष्म अनुसन्धान र त्यसको विश्लेषण गरेपछि प्रहरी अनुसन्धान साघुरिँदै गएको प्रहरी स्रोतले बतायो । अघिल्लो वर्ष साउन १० […]
गत कार्तिक १६ गते गुल्मीको जंगलमा बे’वारिसे तीन श’ब फेला परे । करिब ३२ बर्षकी जस्ती महिला र उनका जूम्लाहा छोरीहरुको श’ब फेला परेपछि सुरुमा श’बको पहिचान नै भएन । पछि प्रहरीको अनु’सन्धानबाट उक्त श’ब पोखरा हेमजामा काम गर्ने सरिता भनिने शिबमाया लिम्बु र उनकी सात बर्षिया जुम्लाहा छोरी गंगा जमुना रहेको पत्ता लाग्यो । […]
काठमाडौ। हाल यतिबेला सामाजिक सन्जालमा निकै नै भाईरल भएको भिडियो बाहिरिएको छ । हामिले त्यो भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा हाम्रो प्यारो नेपालको झन्डा फरफराई रहेको छ । एउटा सानो हाम्रो देश तर सबैको प्यारो देश नेपाल सानो देखि ठूलो सम्म देश को बिच मा रहेको हाम्रो प्यारो देश नेपाल सुन्दा पनि गर्व महसुस […]